Vana Chiremba Vadiki Vopikisa Danho reKushanda Vasina Kubairwa Zvitupa
VaItai Rusike, mukuru weCommunity Working Group on Health
Vana chiremba vari kutanga mabasa muzvipatara zvehurumende, avo vari kuramwa mabasa vachiramba danho rehurumende rekuti vashande vasina kubairwa zvitupa, vasangana nevakuru vakuru mubazi rezvehutano mumusangano wekuedza kupedza gakava riripo
Vana chiremba vari kutanga mabasa muzvipatara zvehurumende, avo vari kuramwa mabasa vachiramba danho rehurumende rekuti vashande vasina kubairwa zvitupa, vasangana nevakuru vakuru mubazi rezvehutano mumusangano wekuedza kupedza gakava riripo.
Musangano uyu waitwa kuzvipatara zveParirenyatwa, Harare Central neMpilo kuBulawayo asi unonzi hauna chawaburitsa sezvo vana chiremba vadiki ava vachinzi varamba kuti vaende pabasa kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa.
Vana chiremba ava vakanyorawo gwaro renyunyuto nemusi weChipiri vachipikisa danho rehurumende iri, uyewo kuti hurumende haina kugara navo pasi kuti ibude nechisungo ichi.
Hurumende inonzi yakati vanachiremba vadiki ava havafanirwe kuita pamuviri panguva iyo vanenge vasati vapedza makore maviri vapinda basa.
Vanachiremba ava vanoti izvi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyaya dzehutano muZimbabwe zvekuti vanachiremba vashande vasina kubairwa zvitupa.
Vanoti danho rehurumende rekuti vashande vasina kubairwa zvitupa rinovaomesera sezvo vasingazokwanisa kana kukwereta mari kumabhanga, kuwaniswa masitendi ekuvakira dzimba nemakanzuru nezvimwe zvakawanda.
Hurumende inonziwo haina kana kutara mari dzinenge dzichitambirwa navanachiremba ava pavanotanga basa.
Mugwaro ravo kugurukota rezvehutano nemamwe mapoka ehurumende, vana chiremba ava vanoti hurongwa uhwu hwunombunyikidza kodzero dzavo sevashandi sezvo vachirambidzwa kupinda mumasangano anomirira vashandi.
Taedza kubata gurukota rezvehutano, VaDavid Parirenyatwa, asi nhare yavo yanga isingadairwe.
Asi VaItai Rusike vanotungamira sangano reCommunity Working Group on Health, vanoti vanokatyamadzwa nedanho rehurumende iri.
“Pari zvino Zimbabwe haina vanachiremba vakakwana, zvichireva kuti vanachiremba vari kutrainwa kubva kuma university edu vashoma zvakanyanya tichienda nehuwandu hwevanhu vanenge vachida kunobatsirwa kuzvipatara,” VaRusike vanodaro.
VaRusike vanoti vanoona kuti vanhu vacharamba vachitambura varwere nekuti vakaenda kuzvipatara vachange vachizopedza nguva yakareba vasati vabatsirwa.
Vanoti hurumende kuburikidza neHealth Service Board inofanirwa kunge ichigara pasi navana chiremba ava kuti vatsvage nzira dzingagadzirisa matambudziko ari kurwadzisa vanhuwo zvavo aya.